Igbe e ji osisi ude mee ihe ịchọ mma | Crafts Na
Igbe ejiri ice cream mee maka ịchọ mma
Claudi ego | | .Chọ Mma, Nzughari
una Obere igbe igbe ejiri ice cream mee, dị mma maka obere nkọwa ịchọ mma ndị ahụ na-agbakwunye mmadụ n'ụlọ.
Taa ị ga - ahụ otu esi eme ka otu nha n'ụzọ dị nfe na obere ihe. Nwere ike idowe site na obere osisi eji achọ mma, gaa na ifuru ma ọ bụ icho mma, nke ga-enye mmetụ ahụ chọrọ ịmata ebe ị debere ya. M na-egosi gị otú m si mee ya!
Bee osisi ice cream abụọ na mkpa, na-ahapụ ibe abụọ, otu dị ogologo karịa nke ọzọ. Nhọrọ nke agba na-ekwughi na ọ bụ nke onwe, ị nwere ike ịme igbe ahụ niile, dịka ọmụmaatụ.
Mgbe ahụ gbubie iberi nke ị bee abụọ. Mgbe ahụ, megharịa usoro ahụ na agba dị iche (ọ bụrụ n’ikpeazụ mee ya dịka m).
Were ogologo ibe ahụ i doziri, na belata ụfọdụ ngafe iji rapara ya n'elu ibe, na-ahapụ ohere n'etiti ha, dị ka a hụrụ na ihe oyiyi.
N'otu ụzọ ahụ dịka ọ dị na ibe dị ogologo, jikọta ndị dị mkpụmkpụ. Cheta ịhapụ otu obosara na ha niile, nke mere na mgbe ị gbakọtara igbe ahụ, akụkụ ya niile na-adaba.
Bee osisi mkpịsị aka abụọ. Hapụ eriri abụọ sara mbara nke otu ogologo dịka akụkụ kachasị ogologo, wee mpekere 4 dị warara nke otu obosara (ịdị elu) nke iberibe ị gbakọtara na mbụ.
Ghichaa eriri warara dị n'akụkụ nke ọzọ na akuku nke akuku kachasi ogologo.
Ozugbo gluu akpọnwụwo, gluu n'akụkụ niile itinye gluu na nkuku (obere ezuola).
Ghichaa eriri abụọ ọzọ dị ogologo na mbara na ala.
Ozugbo akpọnwụ, ọ ga-adị njikere!
Achọpụtara m itinye ụfọdụ osisi plastik eji achọ mma, mana ị nwere ike inyekwu ya ọtụtụ ihe, ma ọ bụ dị ka igbe idowe obere ihe. Echere m na ị masịrị ọrụ ahụ, ị ​​na-anwa anwa ime ya, echefukwala iso anyị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Nzughari » Igbe ejiri ice cream mee maka ịchọ mma
Etu esi eme azu na CD na akwukwo crepe
Home nkwado ka ịdekọ vidiyo na mkpanaka gị